Korean Famous Actors: Choi Soo Jong and So Yi Hyun in Yangon | Myanmar Celebrity Gossip & News
Korean Famous Actors: Choi Soo Jong and So Yi Hyun in Yangon
South Korean Famous Actors; Choi So Jong and So Yi Hyun attended the Opening Ceremony of 2011 Korean Film Festival which is held on 21 October 2011 at Junction Mawtin Shopping Center, Yangon, Myanmar. The 2011 Korean Film Festival was held from 21 to 24 October 2011 at Junction Cineplex and Junction Mawtin Cinemas, Yangon, Myanmar. The Korean Film Festivals has been held in Yangon, Myanmar for six times; in 1998, 2006, 2007, 2008, 2010 and 2011 as the cultural exchange program between Myanmar and South Korea. This Korean Film Festival is hosted by Embassy of The Republic of Korea and Korea Foundation.
အောက်တိုဘာလ (၂၁) ရက်နေ့က မော်တင် Junction Centre မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ကိုရီးယား ရုပ်ရှင်ပွဲတော် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဖွင့်ပွဲ
Korean Famous Actors; Choi So Jong (left) and So Yi Hyun (Right)
The Opening Ceremony of 2011 South Korean Film Festival in Yangon.
On 21 October 2011 @ Junction Centre, Mawtin, Yangon, Myanmar
မောင်မောင်October 26, 2011 at 10:19 AMမြန်မာပြည်လာရဲလို့တော်သေးတယ်နော်။ လတ်တလော ဂျပန်မကိစ္စကလဲ ပူပူနွေးနွေးကြီး မဟုတ်လား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာပရိတ်သတ်ကတော့ လေးစားစရာပဲနော်။ အားပေးလိုက်တာ။ReplyDeletemuanOctober 26, 2011 at 10:48 AMအထင်ကို မကြီးဘူး........!ReplyDeletehjkOctober 26, 2011 at 11:12 AMမြန်မာ ဒါရိုက်တာ မင်းသား မင်းသမီး အဆိုတော် တွေကစ အတုခိုး အထင်ကြီး နေကြတော့သူတို့က ဈေးကွက် လာရှာကြတာပေါ့ ကိုရီးယား ရုပ်တူပြိုင်ပွဲ တဲ့ ကျင်းပကြသေးတယ် ရှက်စရာကောင်းလိုက်တာReplyDeleteဆိုးပေOctober 26, 2011 at 11:30 AMစောက်ရူးတွေ..ReplyDeletehhhOctober 26, 2011 at 2:42 PMမြန်မာမတွေစောက်ဆင့်ကို မရှီဘူးကမ္ဘာမှာ စောက်ရှက်မရှီဆုံး မြန်မာမတွေပဲReplyDeleteအောစုOctober 26, 2011 at 3:57 PMဂျပန်မ ကိစ္စဆိုတာ ဘာကို ပြောတာလဲ မောင်မောင် ?ReplyDeletehjkOctober 26, 2011 at 4:43 PMအောစုရေ ကျောက်ပန်းတောင်းမှာ ဂျပန်မ တိုးရစ် တစ်ယောက် ကို မြန်မာ ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီသမားတစ်ယောက် က တောထဲခေါ်ပြီးလည်ပင်းညစ်သတ်တဲ့ ကိစ္စ မသိလိုက်ဘူးလား ဒီလောက်လူသိများတဲ့သတင်း ကို နောက်သိအောင်မျက်စိဖွင့် နားစွင့် အုန်းနော်ReplyDeletemeOctober 26, 2011 at 8:58 PMဒီဂျပန်မှာတော့ အဲဒီသတင်းချည်းပဲ(-.-) လည်ပင်းညှစ်သတ်တာတခုထဲမဟုတ်ဘူးထင်တယ်နော်..ReplyDeleteအောင်ပုOctober 26, 2011 at 10:24 PMဟုတ်ပဗျာ။ လည်ပင်းညှစ်တာ တစ်ခုထဲတော့မဟုတ်ပါဘူး။ hjk ကရေးမကောင်းလို့ လည်ပင်းညှစ်တာလို့ရေးလိုက်တာနေမှာပါ me ရေ။ကျေးဇူးပါ hjk ရေReplyDeleteဂျစ်ကလေးOctober 27, 2011 at 12:16 AMhhhဆိုတဲ့ အကလောင်.... နင် ပြောချင်းရင် မြန်မာမတွေအကုန်လုံးလို့ မရေးနဲ့နင့် အမေလည်း မြန်မာမဘဲမဟုတ်လား.... လဒရဲ့.. နင့်အမေကဘာလဲ.. ဒါဆိုရင် စာရေးရင် အနှောင့်အသွားလွတ်အောင်ရေး... မြန်မာမတွေ အကုန်လုံးလို့မရေးနဲ့..စောက်ရှက်မရှိဆုံးလား.. စောက်ရှက်အရှိဆုံးလာဆိုတာ နင့်အမေကို မေးကြည့်.. ကြားလား.... hhh သေနာReplyDeleteMyanmarOctober 27, 2011 at 5:12 AMMyanmar is Myanmar never become Korea,Japan and China. should walk own way don't copy from other and don't bow to other. cause they will win always.ReplyDeletephyuOctober 27, 2011 at 7:39 PMi like Korean actress and actorReplyDeletemr.yangonNovember 2, 2011 at 2:21 AMကိုးရီးယားတွေများ၊ ဘယ်နိုင်ငံသွားသွား အားပေးတဲ့လူအပြည့်ပဲReplyDeletehoneyNovember 13, 2011 at 1:45 AMhhhသုံးလုံးနဲ့အကောင်ရေ..နင့်အဘွားမြန်မာ..နင့်အမေမြန်မာ..နင့်အမမြန်မာဒါမှမဟုတ်နင့်ညီမမြန်မာမဟုတ်ဘူးလား...နင်ကကုလားလားတရုတ်လားဘာလဲ..မိုက်ရိုင်းလိုက်တာ..သိအောင်ပြောလိုက်မယ်..စောက်မြန်မာမတွေပြောနေတာ..နင့်အမေကိုနင်အရင်ပြောလိုက်သလိုပါပဲ...ကမ္ဘာနဲ့ချည်ပြီးနှိုင်းယှဉ်ရအောင်မြန်မာမတွေကဘာလုပ်နေလို့လဲ..သစ္စာရှိဆုံးကမ္ဘာမှာမြန်မာမပဲ..ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်မြန်မာမကပထမပဲ..မစော်ကားနဲ့..မသာကောင်ရဲ့...ReplyDeleteAdd commentLoad more...